I-Oceanview Retreat... Eyona mbono ilungileyo entabeni - I-Airbnb
I-Oceanview Retreat... Eyona mbono ilungileyo entabeni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKathy
I-Oceanview Retreat ayisiyondawo yokuhlala nje yindawo ekuya kuyo! Ikhabhinethi yethu yamaplanga ebukekayo ibekwe phakathi kwemithi ekwifama yethu yeeavokhado kwaye ngokungathandabuzekiyo yenye yezona mbono zibalaseleyo zeGold Coast / uLwandlekazi entabeni.
U-Yo uya kubuliswa kukuphuma kwelanga okumangalisayo ekuseni kwaye ebusuku ehluthwe zizibane ezibengezelayo zaseGold Coast.
Kukho indawo yegadi entle enendawo yomlilo kunye negumbi elininzi lokusasaza umbhoxo kwaye ube nepikiniki, ngelixa uthatha iimbono ezintle.
Ikhabhinethi yamaplanga iqulethe ikhitshi eline:
Ifriji yebha, i-microwave, i-frypan encinci yombane (efanelekile kwisidlo sakusasa umz. I-bacon kunye namaqanda, i-omelette), i-grill yombane ye-steak kunye neesoseji , i-kettle, i-toaster, i-coffee plunger, i-teapot , i-tebags, iswekile kunye nobisi (ngesicelo)
Izitya, i-cutlery, ibhodi yokunqunqa, iiglasi zewayini, iiglasi.
Ibhedi enkulu ye-Queen
Kukho indawo enamagqabi kakhulu kunye nedekhi yabucala encanyathiselwe kwikhabhathi (igcwele izibane zasentsomini) apho unokuphumla khona kwaye wonwabele impepho epholileyo kunye nemibono ngeglasi okanye ezimbini zewayini kunye nee-nibbles ezithile.
Zive ukhululekile ukuzisa eyakho ibbq (itafile enikiweyo) okanye ulahle i-yoga mat kwaye wenze i-yoga yesiqhelo.
Idesika / ikhabhathi ibucala ngokupheleleyo kwikhaya lethu njengoko kukho izikrini ze-bamboo kunye nemithi emininzi enamagqabi eyahlula ezi zimbini.
Ukuba ungathanda ukuziphathela i-massage yokuphumla (okanye i-massage ye-massage) kwi-deck yethu ngombono omangalisayo, sinawo amayeza asekuhlaleni anokuthi eze kuwe. Qhagamshelana nam ngeenkcukacha.
4.90 out of 5 stars from 657 reviews
4.90 · Izimvo eziyi-657
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi657
Uncedo lwasekuhlaleni lubandakanya:
Ikhosi yeGalufa yaseMt Tamborine
Gabis Cafe kunye Bar
Ihotele yaseSt Bernards yembali
Tamborine Intaba yeKofu
Ivenkile yokutya okunempilo
Enye imizuzu eyi-10-15 kude yile:-
IGA supermarket , zokutyela,
Ukuhamba kwihlathi lemvula
Udumo lwe "Gallery Walk"
Siyavuya kakhulu ukukunceda ngayo nantoni na okufuneka uyazi malunga nentaba, iGold Coast kunye neendawo ezingqongileyo.